Mampanantena Hamaly Fankahalàna Amin’ny Fitiavana Bebe Kokoa Ireo Miari-Tory Tao San Francisco Ho An’ireo Niharam-boinan’i Orlando · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2016 9:54 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Română , Español, Deutsch, 日本語, English
An'arivony ireo nitangorona tao San Francisco mba hanome voninahitra ireo niharam-boina tamin'ny fitifirana faobe tao amin'ny toeram-pandihizana amin'ny alina tao Orlando, Florida. SARY: Sana Saleem.
Tahaka ny maro hafa, nifoha aho omaly ary nandre vaovao mikasika ny fitifirana tany Orlando. Reko ny teny hoe “fikambanana”, “tifitra” sy ny anaran'ny mpitifitra.
Tsy azoko antoka fa hahavita hamaritra ny halehiben'ny fanaintainana, fahatezerana sy ny fahadisoam-panantenana tsapako aho isaky ny misy fanafihana ataon'ny olona mitondra anarana Silamo. Tahaka ny totohondry miverimberina eo amin'ny tsinay izany, ka tsy misy fotoana ahafahana miaina (mitsoka rivotra). Te hitomany amin'ny maha-anisan'ny fiarahamonina, saingy raha toy izany, matahotra aho na dia ao anatin'ny fisaonana aza. Matahotra ny fiantraikan'izany eo amin'ny olona tsy misy ifandraisany amin'ny zava-nitranga aho – olona izay lavitra tanteraka amin'ny fomba fisainan'ny mpanafika fa anisan'ny lasibatra amin'izany karazana herisetra izany ihany koa izy ireo. Nahita aho ary niaina izany rehetra izany, tahaka izany ihany koa ankamaroan'ny fianakaviako sy ny namako. Manomboka amin'ny ‘mety hidiran-doza tanteraka’ hatramin'ny ‘fahavoazana tsy mivantana’, efa nandre sy niaina izany izahay. Nolazaina izahay fa mahatonga anay ho manonofinofy ny mitaraina, ary tsy tokony “mody manao niharam-boina’ izahay. Ka ho solon'izany, mampiasa fotsiny izany toy ny sakafo ho an'ny vazivazy ratsy izahay. Tsy mamonjy mihitsy anefa izany.
Mpanatrika ny fiaretan-tory ao San Francisco ho an'ireo niharam-boina tamin'ny fitifirana faobe tao amin'ny toerana alim-pandihizana Pulse tao Orlando. SARY: Sana Saleem.
Satria nivoaka omaly [teny anglisy] ny vaovaon'ny fanafihana, nilatsaka tsikelikely ny fanehoan-kevitra. Ahoana no hizarako ny fiarahamiory? Inona no ho mety kokoa avy amin'ny vehivavy Silamo Pakistaney tahaka ahy? Ny eritreritra voalohany tonga tao an-tsaiko dia hoe: Nahoana mihitsy ireo adala ireo no afaka mampiasa fitaovam-piadiana? Saingy raha mandefa izany aho, lazaina fa manao fialan-tsiny ho an'ny mahery fihetsika ara-pivavahana. Raha manameloka ny mahery fihetsika ara-pivavahana, holazaina aho mba hiala tsiny noho ny fahotan'ny hafa. Raha mialà tsiny noho ny fahotan'ny hafa, holazaina aho fa mandoka ny mpankahala Silamo. Tsy milaza na inona na inona, dia holazaina aho fa afa-po ihany koa.
Voafato-dela, malahelo sy malonilony, niala ny tranoko aho mba hanatevin-daharana ireo an'arivony eny an-dalamben'i San Francisco. Maroloko mamirapiratra, no sady manetriketrika ny endrika tao Castro, foiben'ny hetsiky ny LGBT.
Nitsangana niaraka tamin'ireo an'arivony hafa tahaka ny tsirairay aho, niteny momba ny tahotr'izy ireo sy ny alahelon'izy ireo ny olona. Niresaka momba ny fahafantaran'izy ireo ny fomba fahatsapana izany hoe hankahalaina sy atao ajorom-bàla. Saingy indrindra indrindra, na dia tao anatin'ny alahelo aza izy ireo, samy nijoro mafy hanohitra ny fanaovana ho lasibatra ny fiarahamonina hafa izy ireo. “Tsy amin'ny anaranay,” hoy izy ireo. Vonona tsy hamela ity zava-nitranga ity ho ampiasaina amin'ny fanaovana ho lasibatra bebe kokoa ny Silamo any Amerika sy manerana izao tontolo izao ny tsirairay tamin'ireo mpandray fitenenana.
Nahita lahy antitra ketraka aho, mihazona ny lohany eo anelanelan'ny tànany raha nihira teo am-potosofiny kosa ny namany hoe “Haharesy isika” mba hampitony azy. Hitako ny olona mifampitantana, mandrehitra labozia sy mamihina vahiny. Ao anatin'ny vahoaka an'arivony, samy nanana ny tantarany, ny fanehoan-keviny ny tsirairay, ary ekena ny hizara izany. Ekena hoe iza aho, ekena ny volo-koditro ary tsy asaina manamarina ny tenako aho alohan'ny namelana ahy hisaona tahaka ny olon-drehetra. Hitako ny olona mampanantena hamaly ity fankahalàna mpamono olona ity amin'ny fitiavana bebe kokoa, eny fa na dia fanekena bebe kokoa aza, ary fangoraham-po bebe kokoa.
Nahita tanàna tsy toy ny hafa aho omaly alina. Hay, na dia ao anatin'ny fisaonana aza i San Francisco, dia talanjona ianao, be herim-po sy vonona hanao mihoatra izay heverina izy.
‘… na dia ao anaty alahelo aza, nijoro mafy ny tsirairay mba hanohitra ny fanaovana ho lasibatra ny fiarahamonina hafa. “Tsy amin'ny anaranay,” hoy izy ireo.’ SARY: Sana Saleem.